फेसएपबाट बुढो हुने रहर, मोबाईल विवरण अन्त जाला ! - NEPALI TV AUSTRALIA
एजेन्सी – तपाईलाई बुढो हुने रहर छ ? ईन्टरनेटको दुनियाँमा अहिले ‘फेस एप’ भन्ने नयाँ मोबाईल एप्लिकेसनले बजार तताईरहेको छ। समाजिक संजालहरुमा उक्त एपले आफ्नो बुढेसकालको तस्विर बनाएर हाल्ने प्रतिस्पर्धा जस्तै चलिरहेकोछ । फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्राम आदी लगायत एपहरुमा उक्त फेसएप बाट बनाईएका बुढेसकालका फोटाहरु हाल्ने क्रम बिश्वब्यापी रहेको छ। फेसएप अहिले आईओएस र एण्डरोईडमा सबैभन्दा बढी डाउनलोड भैरहेको एप हो। सन् २०१७मा रुसमा निर्मित उक्त एप अहिले भाईरल भैरहेको छ।
यस्तो सम्झौता रहेको एपमा प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना क्यामेरा रोलका अरु फोटोहरु पनि पर्योग हुन सक्ने तर्फ बिज्ञहरुले शंका गरेका छन्। क्यामेरा रोल बाहेक मोबाईलमा रहेका अरु महत्वपुर्ण ब्यक्तिगत सुचनाहरु पनि भविष्यमा अरुको हातमा पुग्न सक्ने खतरा तर्फ सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको छ। मानिसहरु अहिले #फेस_एप_च्यालेन्ज भनेर सामाजिक संजालहरुमा रमाईरहेका छन् तर उक्त एपबाट भोलिका दिनमा आउन सक्ने खतरा तर्फ सजग रहन भनिएको छ।